के तपाईं सिंहासनको गेम हेर्न पछि गलत पीढीमा जन्मे जस्तो लाग्छ? म तिमीलाई बुझ्छु! अन्तिम सीजन लगभग यहाँ छ र म शान्त रहन सक्दैन!2वर्षको प्रतीक्षामा कुनै पनि गोटी फ्यानको लागि आक्रोश हो। तर, पहिलो एपिसोड हेर्न पछि, मलाई थाहा छ यो प्रतीक्षाको लागी केहि हुनेछ। गोटीको सेटहरू केवल अतियथार्थ्य र उत्कृष्ट हुन्छन् र प्रत्येक गोट प्रशंसकले कम्तिमा एक पटक यी सेटहरू भ्रमण गर्न चाहन्छन् जुन उनीहरूको मनपर्ने दृश्य पुन: सिर्जना गर्न। अहिले सम्म, हामी सबै ठाउँहरु जहाँ गोटी गोली मारिएको छ र तिनीहरू सजिलै अभूतपूर्व छन् भनेर थाहा छ। बस किनभने यो विदेशी भूमिमा होईन मतलब छैन तपाईं यहाँ भारतमा भित्री महसुस गर्न सक्नुहुन्न। * wink * म तिमीलाई दिन्छु भारतमा स्थानहरू सिंहासनमा फ्यानको हरेक खेलको भ्रमण गर्नु पर्छ किनकि तिनीहरू लुगा लगाउँदा समान देख्छन्!
* भ्रामक अलर्ट!
बेंगलुरु पैलेस: तपाईको धेरै भन्दा ठुलो!
के तपाईंलाई दृश्य सम्झना छ जहां मार्गीरी हाईगार्डन को बारे मा Sansa बताउँछ? उनको सुन्दर सुन्दर हागार्डनको बारेमा बताउँदै। उत्तम फूलहरु संग पूर्ण चारैतिर हरियो हरियो र सौन्दर्य कल्पना गर्नुहोस्। बेंगलुरु महल निराश छैन। यो 'सौन्दर्य, जादुई वास्तुकला र बंगलादेशको सही मौसमले ओलिनेना टाइरेल हाईगार्डनसँग एक आदर्श म्याच बनाउँछ।
2। कश्मीर: "उत्तर याद छ" हो! WINTERFELL
उत्तरमा स्थित, अझै सम्म सर्दमा हरियाली र बर्फ क्लड पर्वहरूसँग एक आकर्षण छ, जस्तै Winterfell जस्तै। यदि सबैले यहाँ केहि दृश्यहरूलाई गोली हान्यो, कसैलाई थाहा थिएन! शीतफेलले कश्मीर सुन्दरतासँग तुलना गर्दछ। सर्नेफेल कसलाई थाहा थियो भारतमा हुन सक्छ? यो पनि यस्तै प्रकारको कथा हो। यकिन गर्नुहोस्, यदि तपाईं सक्नुहुन्छ!
3। जयसलमेर कसैले? कहिल्यै थियो वा हुनेछ! यो तपाइँका साथीहरू हुनुहुन्छ!
यसको भव्य महलहरू र समग्र पुरातन रूपको साथ, जेसलमेरले तुरुन्तै कर्थ जस्तो देखिन्छ - जुन सबैभन्दा ठूलो शहर थियो वा त्यो हुनेछ। यसबाहेक, शहर वरिपरि रेती घडी 'रेड अपशिष्ट' को दर्पण छवि हुन् जसको नजिकै हो। यस शहरको टूर ले ख्यालसी को प्रभावशाली भवनहरु बीच अवकाश यात्रा गर्न को लागी।
4। जिम कर्बेट ESSOS जस्तो देखिन्छ
ठाउँ जहाँ डानरेरी खालीसी भयो। ठाउँ जहाँ डथर र टार्गेरीन्सले घुम्न थाल्यो र उनीहरूको विवाहलाई भोग्नुपरेको थियो, र वन्यजीवनले जिम कर्बेटको महसुस गर्छ। जंगलको बीच खेलिसी जस्तो महसुस गर्नुहोस्!
5। हभेलक टापु, अंडमान। तिम्रो के बिचार छ? PENTOS
ठाँउ जहाँ खर ड्रोगो र डानरीरी हक भयो! ठाँउ आँखाको उपचार थियो भन्ने कुनै संदेह छैन। हवेलक आइल्याण्ड - अन्डम्यान र निकोबार टापुको भाग एउटा सही स्थान हो जुन समुद्र तटमा समुद्र तटको प्यान्टसलाई गोली मार्न को लागी दृश्य पुनरुत्थान गर्दछ।
6। फतेहपुर सिक्रीले स्पष्ट रूपमा सेप्टेम्बरको सेप्लरको जस्तो
सेप्टेम्बरको बेलर रेजिनाको सुन्दरता र महत्त्वको ठाउँ थियो, निस्सन्देहीसम्म हाम्रो दुष्ट रानीले यसलाई झट्याउन थालेको थियो। आगरा मा फतेहपुर सिक्री एक भव्य स्मारक हो जुन केवल सितम्बर जस्तै लंबा खडा छ र यदि तपाईं आफैं को निर्माण को लागी कल्पना गर्छन तब तपाईं आखिरी दृश्य को सबै चलन प्राप्त गर्दछ।
7। उदयपुरले तिमीलाई कल्पना गर्न सक्दिन यो यो डोरो!
क्या तपाईंलाई कहिले काँही डर्नई को दृश्य उदयपुर मा गोली मारने वाला थियो भने नोटिस गर्नेछन्? म सकेन उदयपुरमा, सबै कुरा डर्न जस्तै छ। झीलहरू, महलहरू र सुन्दर बागहरू द्वारा घनिष्ठ, उदयपुर तपाईंको आदर्श स्थान हो जुन सिंहासनको खेललाई रिहाइन्छ!
म गहिरो सीजन 8 को लागी प्रतीक्षा गर्न सक्दैन। नयाँ स्थानहरू, स्टोरेज र स्पिन चिसिङ बन्द गर्ने, थप खेलको थोरैस एक घटना भएको छ! यी सबै ठाउँहरु पत्ता लगाउनुहोस् र आफुलाई साहसिक र फंतासी भरिएको एक आरामको छुट्टी दिनुहोस्!
नियम र शर्तें आरक्षण नीति रद्दी नीति ब्लग प्रशंसापत्र हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस साइटमैप